समाचार - उपयुक्त मल उर्वरक उपकरण किन्नको लागि सल्लाहहरू
उपयुक्त मलखाद उपकरण किन्नको लागि सल्लाहहरू
सबैभन्दा धेरै समस्या भनेको मल उपकरणहरूको मूल्य कारक हो।
मलखाने उपकरण मूलत: ठूलो स्तरको मेशिनरी हो, र यसको मूल्य उच्च छ, त्यसैले हामीले खरीद दरको उपयोगिताबाट प्रमाणित गर्नै पर्दछ, कि खरीद गरिएको मेशिनले यसको प्रदर्शनलाई पूरा खेल दिन सक्छ कि सक्दैन, यसको प्रदर्शन उपयोग प्रयोग गर्दछ? त्यसोभए मूल्य विचार गर्नुहोस्।
आँखा चिम्ले सस्तो मेसिनरीको लागि नहेर्नुहोस्, तर गुणवत्तामा ध्यान दिनुहोस्। यो लागत प्रभावकारिताको आवश्यकता हो।
उदाहरण को लागी जैविक मल उपकरणको मुख्य प्रक्रिया के हो?
केही किसानहरू पूर्ण हानिरहित निपटान गर्छन्, तिनीहरूलाई जैविक मल कच्चा मालमा प्रशोधन गर्छन् र जैविक मल प्रसंस्करणमा बेच्छन्। यो उद्देश्य धेरै स्पष्ट छ, कच्चा मालको प्रारम्भिक प्रशोधनले, यसले जैविक मल उत्पादकहरूको किण्वन प्रक्रिया घटाउँछ, र साइटमा कच्चा मालको प्रारम्भिक प्रशोधनको अनुभूति गर्दछ। एकातिर यसले कृषकहरूको मल बिक्री र प्रारम्भिक प्रशोधनको आम्दानी बढाउन सक्दछ, र अर्कोतर्फ यसले जैविक मल प्रसंस्करण व्यवसायको प्रक्रियालाई घटाउन सक्छ। अवश्य पनि, त्यस्ता प्रशोधनहरूलाई साधारण प्रारम्भिक उपकरणहरू मात्र आवश्यक पर्दछ।
दोस्रो, फार्म वा मल प्रसंस्करण कम्पनीहरूका लागि, यो पाउडर जैविक मल वा दानायुक्त जैविक मल हो, पूर्ण जैविक मल उत्पादन लाइन खरीद गर्न अपरिहार्य छ। जैविक मल उपकरणको मूल्य र प्रारम्भिक प्रशोधन लगानीको मूल्य एक छैन।
बिभिन्न जैविक मल उपकरणहरूले बिभिन्न विधिहरू प्रयोग गर्दछन्, र निर्माण प्रक्रिया र उत्पादन पनि धेरै फरक हुन्छन्, त्यसैले हामीले हामीले विचार गर्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको मुख्यतया हामीले प्रयोग गरिने कुरा हो, र त्यसपछि उपकरणहरू छनौट गर्नुहोस्। धेरै प्रयोगकर्ताहरू मुख्यतया कच्चा मालले बनाएको केहि उर्वरका लागि प्रयोग गरिन्छ, त्यसैले प्रयोग फरक छ। यदि हामीले माटोको गुणस्तर सुधार गर्ने हो भने हामी एक मुफ्ती-फंक्शनल जैविक मल जैव-गोलाकार गोली मेसिन छान्न सक्छौं। यस उपकरणले हाम्रो आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्छ। जैविक मल उपकरणको प्रयोग धेरै सस्तो छ र अपरेसन धेरै सुविधाजनक छ।